Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Khudbad ka jeediyay Shirka Ururka Midowga Afrika oo lasoo gabgabeeyay | raascasayrmedia.com
← Nabadgelyada Puntland waa muqadas, waxa na u xilsaaran reer Puntland W/Q Prof. Maxamed Xareed
Ururka Shahed oo Lagu doonsiiyay buugaag+Sawiro →
July 27, 2010 · 8:39 pm
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Khudbad ka jeediyay Shirka Ururka Midowga Afrika oo lasoo gabgabeeyay
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ahaa madaxdii ka qaybgalay shirkii Midowga Afrika ee lagu soo gabagabeeyay maanta Magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa khudbad uu kaga hadlay Arrimaha Soomaaliya ka jeediyay kulankaas.
Sheekh Shariif, wuxuu ka codsaday Madaxdii shirka ka qaybgalay in dowladdiisa gacan laga siiyo sidii ay iska caabin lahayd kooxaha dagaallada kula jira oo uu xusay inay xiriir la leeyihiin Al-Qaacida.
“Waxaan nagu soo duulay dagaalyahanno u kala dhashay Afghanistan, Pakistan, Ciraaq iyo dalal kale, waxayna kaashanayaan Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin iyagoo ku dagaalamaya calanka Al-Qaacida.” ayuu Madaxweyne Shariif ku sheegay khudbadda uu ka jeediyay shirka Midowga Afrika.
Madaxweynaha oo xirnaa Suud Madow ayaa khudbaddiisa ku aqriyay Afka Carabiga, isagoo xusay in dowladdiisu ay uga baahan tahay dalalka Afrika iyo Calaamka inay gacan ku siiyaan sidii loosoo celin lahaa ammaankii iyo kala dambeyntii Soomaaliya.
“Khatarta ay ku jirto Soomaaliya waa mid muuqata, dagaallada ka socda haddii aan wadajir looga hortagin waxay khatar gelin karaan dalalka Afrika iyo kuwa kale ee Caalamka.” ayuu Madaxweyne Shariif yiri.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay inaysan awood badan u lahayn inay iska difaacaan weerarrada kaga imaanaya kooxaha dagaalka kula jira, kuwaasoo uu ku eedeeyay inay doonayaan dowladiisa dumiyaan.
Madaxweyne Shariif wuxuu sheegay in dowladdiisa intii ay jirtay ay xoogga saartay howlaha dib u heshiisiinta, wuxuuna xusay inay heshiisyo la galeen garab ka mid ah Ururka Xisbul Islaam iyo Culumaa’uddiinka Ahlusunna Waljamaaca.
Sheekh Shariif ayaa u mahadceliyay Madaxweynaha dalka Uganda Yuweri Museveni isagoo ku amaanay sida uu u garab taagan yahay Dowladda Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale amaan u jeediyay ciidamada AMSIOM oo ka socda Burundi iyo Uganda, kuwaasoo uu sheegay inay dowladdiisa difaacaan.
Madaxda Ururka Midowga Afrika oo soo gabgabeeyay shirkoodii 15-aad oo ay ku yeesheen Magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qodobbadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in 2000-askari oo dheeraad ah si deg-deg ah loogu diro Soomaaliya.